जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलको क्षेत्रिय भेलामै हानाहान, अधिवेशनमा के होला ? » नेपाल प्लस
जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलको क्षेत्रिय भेलामै हानाहान, अधिवेशनमा के होला ?
-गणेश पाण्डेय, लिस्बोन
नेपाली काँग्रेसको प्रवासी भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलको पाँचौ अधिवेशन यही जुलाई २३ तारिखकादिन हुने भएको छ ।समितिको गत २२ जुनमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । पोर्चुगलमा सन् २००६ मा स्थापना भएको समितिमा दुई कार्यकाल पूर्ण हमाल सभापति भए भने पछिल्लो दुई कार्यकाल लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा सभापति रहेका छन् । अधिबेशन नजिकीएसँगै सभापति पदमा अहिलेसम्म चार जनाले आफूलाई प्रत्यासिका रुपमा उभ्याएका छन् ।
यसरी आगामी कार्यकालको लागि नेजस पोर्तुगलको सभापतिमा दाबेदारी गर्नेहरुमा राजकुमार गौतम, सुशील शर्मा, तिलक गैरे र बिनोद घिमिरे रहेका छन् । राजकुमार गौतम दोश्रो अधिबेशनका उपसभापति हुन् र उनीसंग कार्यबाहक सभापतिको रुपमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको अनुभव छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट नेपाल बिद्यार्थी संघ काभ्रेबाट सकृय भएका गौतम तरूनदल र पार्टीको उच्च तहमा रहेर काम गरेको अनुभब छ ।
सुशील शर्माले निरन्तर दुई कार्यकाल उपसभापति भई काम गरिसकेका छन् र सभापतिको अनुपस्थितिमा पटक-पटक कार्यबाहक सभापतिको रुपमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको अनुभव छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सकृय भएका शर्मा नेपाल बिद्यार्थी संघ नवलपरासीका पूर्व जिल्ला सदस्य समेत हुन् ।
तिलक गैरे लामो समयदेखि नेजस पोर्तुगलका गतिविधिहरुमा संलग्न हुदै आएका छन्। गैरेसँग बर्तमान कार्यसमितिमा उपासभापतिको अनुभव छ । बिनोद घिमिरे विशेष गरी पोर्चुगलको नेपाली समाजमा बरिष्ठ पत्रकारको रुपमा चिनिन्छन । घिमिरेसंग नेजस पोर्चुगलमा यसअघि एक कार्यकालमा सदस्य र दुई कार्यकाल महामन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेको अनुभव छ । विद्यार्थी कालमा नेपालमा रहँदा नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय घिमिरे बर्तमान समितिका महामन्त्री हुन्।
सभापति पदका आकांक्षीहरु तिलक गैरे र सुशील शर्मा समितिको संस्थापक सभापति हमालको नजिकका रहेका र बिनोद घिमिरे बर्तमान सभापति लक्ष्मी सापकोटा निकट रहेको श्रोतको दाबी छ भने नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिबेशन प्रतिनिधि चयनको बिषयलाई लिएर राजकुमार गौतमले बिद्रोह गरेका थिए । अब पल्ला भारी कसको हुन्छ, त्यो हेर्न भने बाकि छ ।
सभापति पदका आकांक्षीहरुले अहिले आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउनका लागि दौडधूप शुरु गरेका छन् । अधिबेशनलाई लक्षित गरी नेजस पोर्तुगलले यतिबेला सदस्यता नबिकरण तथा नयाँ सदस्यता बितरणलाई तीब्रता दिएको छ । यसै क्रममा राजधनी बाहिरका ओडिमेरा, सान्टोन्तोनिया र जम्बोजेरा क्षेत्रका लागि जम्बोजेरामा भएको क्षेत्रीय भेलाले वकिल के.सी.को अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय तदर्थ समिती चयन गरेको छ ।
क्षेत्रीय भेलाका लागि लिस्बोनबाट संस्थापक अध्यक्ष पूर्ण हमाल, महाधिवेशन प्रतिनिधि चिज कुमार तामाङ, जन सम्पर्क समिती पोर्तुगलका उपसभापति क्रमशः तिलक गैरे, सुशील शर्मा, महामन्त्री बिनोद घिमिरे, कोषाध्यक्ष कुबेर कार्की, श्याम परियार, बृहस्पति कडेल र मुक्ति नारायण श्रेष्ठ आदि गएका थिए ।
सो कार्यक्रम पश्चात बेलुका भएको खानपान कार्यक्रममा सामान्य बहसमा पनि तथानाम गालीगलौच, मोबाईल हानाहान र मुक्का हानाहान भएको र परिस्थिकी अनुकुल नभएपछि लिस्बोनबाट क्षेत्रीय भेलामा गएका कुबेर कार्की र मुक्तिनारायण श्रेष्ठ सहित तिन जना रातिनै ट्याक्सीमा लिस्बोन फिर्ता भएको बिशेष श्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । जनसम्पर्क समिती पोर्चुगलको अधिवेशन आगामी २३ जुलाईका दिन राजधानी लोस्वनमा हुने तय भ्एको छ भने उक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नका लागी केन्द्रिय नेताहरु आउने भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: July 13, 2017